🥇 ▷ 8 Ciyaaraha loo yaqaan 'Minecraft-like' si loo dhiso, loo burburiyo oo loo badbaadiyo! ✅
8 Ciyaaraha loo yaqaan ‘Minecraft-like’ si loo dhiso, loo burburiyo oo loo badbaadiyo!
Minecraft waa dhacdo la yaab leh oo ku dhacdey malaayiin dad ah. Sidaa darteed, dad badan oo ku dayasho leh ayaa suuqa galay. Ciyaarro kaladuwan ayaa ka faa’iideystey isla bilicsanaanta iyo dhismeyaashii ciyaarta caan ka ahaa, ka dibna lagu daro waxyaabo dheeraad ah oo dheeraad ah. Dhowr qof ayaa xooga saaraya ficil, kuwa kale oo ku saabsan walxaha RPG ama dhismaha, sida aad ku arki doontaan qodobkaan oo dhan.
Soo arag 8-daas cayaar oo u eg kuwa loo yaqaan ‘Minecraft’ ee aan doorannay si aad u sii waddo dhismaha, burburka iyo badbaadka, kali ahaan iyo shirkad ahaanba. Waxaad la ciyaari kartaa baloogyada muddo dheer!
Meelaha: PC, Android, iOS, Playstation 3, Playstation 4, XBOX 360, XBOX One, Wii U iyo Nintendo Switch.
Terraria waa fududahay in la qeexo: waa 2D Minecraft, oo leh waxyaabo badan oo la dilo iyo hub been abuur ah.
Ciyaartu waxay u oggolaanaysaa ciyaartoy kastaa inuu ogaado naftiisa sida waxyaabaha loo dhiso iyo waa maxay waxyaabaha la iskuna ururin karo. Intaas waxaa sii dheer, wax walba waa lagu burburin karaa Terraria iyada oo ujeedadu tahay aruurinta alaabada iyo helitaanka sirta. Waxaad ogaan doontaa in ciyaaruhu ka dhacayaan dusha sare iyo dhulka hoostiisa, sidaa darteed wax badan baa la sahmi karaa!
Terraria waxay leedahay wareeg wareeg ah habeen iyo maalin, kaas oo wax ka beddeli doona laydhka, cadawga iyo is-dhexgalka NPCs. Daqiiqad kasta oo maalinta ah waxay ku habboonaan doontaa hal nooc oo nashaadaad ah ama mid kale, waa wax ay tahay inaad naftaada ku ogaato.
Dhiirrigelinta ugu fiican ciyaarta waa in la dhiso guri kuu gaar ah. Markaad ballaadhiso oo aad horumariso dhismayaashaaga, jilayaasha ayaa u muuqan doona kuwa kaa caawin doona daawaynta, iibinta waxyaabaha ka wanaagsan, adeegyada kale. Soojiidasho! Waxay soo muuqan doonaan oo keliya haddii aad dhisto qolal wanaagsan, oo ay wataan qalabkooda, boos kufilan iyo iftiin.
Ciyaar Terraria haddii:
Waxaad dooneysaa inaad waxbadan uga sii socoto qibradeynta Minecraft ee jawiga 2D.
Meelaha: PC, Playstation 4, Xbox One iyo Nintendo Switch.
Waxaa dhiirigaliyay guusha Minecraft iyo waxyaabaha la midka ah ee lagu dhisayo dabaqyo, Lego Worlds waxay bixisaa dhammaan soojiidashada iyo quruxda astaanta toy-ga ee loogu talagalay adduunka. Halkan waxaad ku sameyn kartaa waxkasta oo aad rabto marxaladaha: dhis, burburin, koobi, hagaajin sida aad doorbideyso. Lego Worlds waa adduunkiinu!
Ciyaartu waxay leedahay laba waji. Dhanka kale, waad sahamin kartaa adduunka, waxaad dhameystiri kartaa howlaha waxaadna heli kartaa xirfado cusub. Dhanka kale, Lego Worlds waxay leedahay tifaftire awood badan, hufan oo sahlan oo la isticmaali karo oo aad ku dhisi doontid dhammaan noocyada wax kasta, illaa iyo inta fikirkaagu gaaro.
Daaro Lego Worlds haddii:
Waxaad dooneysaa inaad ogaato waxaad dhisi laheyd haddii aad lahaan lahayd gogo ‘aan xad lahayn oo Lego ah.
3. Sheekada Xanibaada
Meelaha: PC, Android iyo macruufka.
Block Story waa laga yaabaa inuu yahay mid ka mid ah cayaaraha ugu dhow ee loo yaqaan ‘Minecraft’, laakiin wuxuu bixiyaa wax kale oo ay uga mahadcelinayaan cunsuriyada RPG. Naftaada waxaad ku dhex gelin doontaa adduun weyn oo furan oo diyaar kuu ah si aad wax uga beddesho oo aad u dhisto sida aad doorbideyso. Waxaas oo dhan waxaad sameyn doontaa inta aad la dagaallameysid jiidooyinka, aad hesho hub sixir ah, baranaysid xirfado cusub iyo howlo dhameystiran. Sida ku jirta RPG-yada!
Tan waxaan ku dari karnaa in Block Story leeyahay beel wanaagsan oo wadaaga dareenka iyo mods si ay u habaynayso ciyaarta. Isku soo wada duuboo, wax walbana waxay xasuusinayaan wax badan oo ka mid ah Minecraft, gaar ahaan sawirada, waxayna leeyihiin waxyaabo kufilan oo aad maalin walba ogaan doontid.
Ciyaar Sheekada Xannibaadda haddii:
Haddii aad taageere u tahay Minecraft oo aad jeceshahay waxyaabaha RPG.
Meelaha: PC, PS4 iyo Xbox One.
Trove waa ciyaar kale oo ah isku dhafka wanaagsan ee u dhexeeya waxa Minecraft uu la leeyahay dhinacyada RPG. Waxay leedahay adduun furan oo ballaadhan oo ay ku sahamiso iyo, dhiirigelin ahaan, waxay leedahay tiro aan macquul ahayn oo ikhtiyaaraadka is-habeynta. Sidan, dabeecaddaadu waxay noqon doontaa mid gaar ah.
Markii diirada la saaray habka on-line, Trove waxay dhiirigelisaa ciyaartoydu inay wada falgalaan. Marar badan waa lagama maarmaan in la sameeyo kooxo si ay uga faa’iidaystaan ​​wax kasta oo ciyaarta ay bixiso, sida godka ama madaxyada adag ee ay adag tahay in laga adkaado. Faahfaahintaani waxay ku xasuusineysaa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan ‘MMORPGs’.
Ciyaar Wareega hadii:
Waxaad jeceshahay wax kasta oo Minecraft leeyahay iyo sidoo kale is-dhexgalka ka dhexeeya ciyaartoyga.
Waxaad dooneysaa khibrad la mid ah qaar ka mid ah MMORPG oo leh godadka iyo koox si wada jir ah si aad uga adkaato cadawga adag, laakiin leh baloogyo, baloogyo badan!
Sida uu cinwaanku tilmaamayo, Cube World waxay la mid tahay naqshad farshaxan oo la mid ah tii Minecraft. Waxay ku siineysaa fursad adiga kuu sahlan oo aad ku sahamin karto xawaarahaaga iyo meesha aad rabto. Si kastaba ha noqotee, farqiga weyn ayaa ah in Cube World uu aad ugu sii jeedo kobcinta dabeecadda, ee uusan ahayn farsamada dhismaha.
Cube World waxaad diiradda saari doontaa kor u qaadista heerarka dabeecadda, helitaanka xirfado cusub, qalabeynta dharka wanaagsan iyo sahminta khariidadda. Adigoo xooga saaraya dhinacyadan, waxaad dooran kartaa fasalka iyo takhasuska, wax aad u xasuusata RPGs-ga caadiga ah.
Ciyaar Cube World haddii:
Waxaad dooneysaa ciyaar-qaabeeya Minecraft-kaas oo diiradda saaraya hagaajinta dabeecaddaada oo aadan raadineynin khibrad dhisme oo dhameystiran.
6. Farshaxanka adduunka
Meelaha: PC iyo macruufka.
Ciyaar kale oo 2D ah oo leh astaamo la mid ah kan loo yaqaan ‘Minecraft’. Farshaxanka adduunka sidoo kale aad ayuu ula mid yahay Terraria, in kastoo farqiga weyn uu yahay in aad tahay hoggaanka koox koobi ah, halkii aad ka noqon lahayd qof dabeecad ah.
Craft World, waa inaad soo aruurisaa agab ku filan oo aad ku dhisto aaladaha teknolojiyada, marka lagu daro ka-badbaadayaasha halista badan ee weerarada habeeya. Hadafku waa in la dhiso xero u horseedda kooxda adduun weynaha, halkaas oo howsha lagu soo celin doono. Nasiib darrose, ciyaaruhu ma keenaan hal-abuurnimo caan ah marka la barbar dhigo liiska intiisa kale.
Ciyaar Farshaxanka Adduunka haddii:
Haddii aad sidoo kale jeceshahay Terraria laakiin waa wax xiiso leh in aad mas’uul ka tahay koox.
Terasology waa ciyaar si buuxda u soo jiidatay shirkadda Minecraft oo dhowr qof ayaa jahwareerin kara labada kulanba. Marka la eego qaabka suuxinta, labada ayaa aad iskugu mid ah laakiin Terasology waxay door bidaa qaab macquul ah. Biyaha iyo cirka labaduba waxay dareemayaan inay run yihiin.
Soo-saareyaashu waxay u tixgeliyeen Terasology inay u tahay qadarin macdanta ‘Minecraft’, sidaa darteed dhinacyada wax lagu iibsan karo ayaa aad isugu eg. Farsamooyinka dhismaha iyo burburka masraxa waa isku mid. Xitaa sidaas oo ay tahay, Terasology waxay keentaa warar sida sameynta ciidan maadooyin ah oo ilaaliya waxyaabahaaga.
Muhiimad weyn oo laga leeyahay cayaartan ayaa ah in ay tahay il furan (Il furan). Si kale haddii loo dhigo, ciyaartoy kasta wuxuu gacan ka geysan karaa horumarinta iyo ballaarinta mashruucan, kaasoo tilmaamaya horumar joogto ah bilaha.
Daaro Terasology haddii:
Waxaad dooneysaa inaad la kulanto nuqul ka sii badan oo aan rasmi ahayn ‘Minecraft’, oo leh cusbooneysiin joogto ah.
Xannibaadda ‘Blostorm’ waa FPS (ciyaarta qofka ugu horreysa ee toogashada ah) ee ka dhaca adduunka lagu sameeyey baloogyada. Ciyaarta ayaa kuu oggolaaneysa inaad abuurto oo aad tafatirto khariidadaha ka dibna aad la wadaagto ciyaartoy kale. Fursadaha dagaalku waa kuwa aan dhammaad lahayn, oo seenyada oo dhan waa la burburin karaa!
Ciyaartan ayaa la socota isla line-ka isla inta badan FPS. Waa inaad sameysataa koox ciyaartoy kale waana inaad meesha ka saartaa kuwa kaa soo hor jeeda. ‘Blostorm’ wuxuu leeyahay qaabab kaladuwan, sida ciribtirka, qabashada calanka, iwm, iyo awood u lahaanshaha la dhaqanka deegaanka oo dhan waa neefsashada hawo cusub oo hiddaha.
Bal qiyaas: kaligaa ayaad tahay oo waxaad ka heli kartaa cadaawayaashaada buundo. Maxaad qaban kartaa? Garaac buundada oo burburi si ay u dhacaan!
Kusoo Ciyaar Xiisad Haddii:
Waxaad jeceshahay labadaba Minecraft iyo ciyaaraha toogashada.
Waxaad dooneysaa ciyaar si xoog badan diirada u saarta, laakiin adiga oo aan lumin waxyaabaha la mid ah ee Minecraft.
8 ciyaaro indie oo loogu talagalay PC oo leh shuruudaha yar oo ay tahay inaad ciyaarto!